SATW Foundation kwuputara ndị mmeri nke 2021 nke Asọmpi Nlekọta Njem Lowell Thomas
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » SATW Foundation kwuputara ndị mmeri nke 2021 nke Asọmpi Nlekọta Njem Lowell Thomas
Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị mmeri "gosipụtara ike ha site n'ịmepụta akụkọ mbụ, nke bara uru na nke na -agbagharị agbagharị nke kpuchiri oge na ọnọdụ nke afọ gara aga," ndị ikpe kwuru maka ọrụ ndị ahụ, nke kpuchiri oge opupu ihe ubi nke 2020 ruo oge opupu ihe ubi nke 2021. ma gosipụta n'ọtụtụ ụzọ uru na -adịgide adịgide nke ọrụ ha. ”
Akwụkwọ akụkọ njem na -egosi mettle ya na 2021 Lowell Thomas Awards.
Ndị meriri na asọmpi SATW Foundation na -eme nke ọma n'inyere ndị na -agụ ya aka ịtụle ọrịa ọjọọ
Ntinye 1,278 na asọmpi kwa afọ, nke Society of American Travel Writers Foundation na -elekọta, bụ ihe kwesịrị ịrịba ama maka ụdị, oke na ọrụ ha nyere ndị na -agụ ya.
Onye nta akụkọ dijitalụ, akwụkwọ akụkọ mpaghara na akụkọ onye na -ede akụkọ enweghị akụkọ banyere oke ehi na -ebu n'ụgbọ elu so na ndị meriri na nturu ugo nke 37 nke Lowell Thomas Travel Journalism Competition n'ime otu afọ nke enweghị map okporo ụzọ.
Ntinye 1,278 na asọmpi kwa afọ, nke ndị nlekọta na -elekọta Otu ntọala nke American Travel Writers Foundationn, bụ ihe ama ama maka ụdị ha, oke ya na ọrụ ha maka ndị na -agụ akwụkwọ gbalịsiri ike inwe echiche nke njem njem ihu nke oria ojoo tụgharịrị. Mahadum Missouri Schoollọ Akwụkwọ akụkọ na -ahụ maka ikpe ahụ, nke gụnyere ndị ọka ikpe 27 n'afọ a.
A mara ọkwa onyinye ahụ na Mọnde, Ọkt. 4, na Mgbakọ SATW na Milwaukee. A na -ahụta nsọpụrụ a dị ka nnabata ọkachamara kachasị maka ndị nta akụkọ njem na ndị na -ekwurịta okwu. Ntọala ahụ na -enye onyinye 104 na edemede 27 yana $ 22,550 na ego nrite n'afọ a.
Katherine LaGrave, onye nchịkọta akụkọ atụmatụ dijitalụ maka AFAR Media, ka a kwanyere ugwu dịka onye nta akụkọ njem ala Lowell Thomas nke Afọ. Ndị ọka ikpe toro ịkọ akụkọ ya na mkpesa ya yana mgbado anya ya n'ihe ndị ọ dị mkpa ka ndị mmadụ mara ka ha wee mara ihe ịma aka njem taa.
Onye ahịa Cleveland Plain nwetara onyinye ọla edo maka mkpuchi njem akwụkwọ akụkọ. Ndị ọka ikpe zoro aka na nchịkọta akụkọ Susan Glaser '' laser na-elekwasị anya na ndị na-agụ akwụkwọ '' bụ ndị chọrọ ebe dị nso n'ụlọ mgbe ọrịa ọjọọ ahụ gasịrị.
Page 1 nke 8 Na Mbụ Osote